Moovly: Mamolavola horonantsary mihetsika, doka na infografika | Martech Zone
Moovly: Mamolavola horonantsary mihetsika, doka Banner na Infografika
Alatsinainy, Aogositra 12, 2013 Douglas Karr
Ny mpamoron-tsainay dia niasa mafy tamin'ny asany, vao tsy ela akory izay horonan-tsary mihetsika ho an'ny Right On Interactive. Ankoatry ny fahasarotan'ny sary mihetsika, ny fandikana ny sasany amin'ireo horonan-tsary dia maharitra ora maromaro amin'ny fampiasana fitaovana mahazatra amin'ny birao. Moovly (ao amin'ny beta amin'izao fotoana izao) manantena ny hanova izany, manome sehatra ahafahan'ny tsirairay mamorona horonan-tsary mihetsika mora, doka amin'ny sora-baventy, famelabelaran-kevitra mifandraika ary atiny mandroso hafa.
Moovly dia fitaovana an-tserasera tsotra mamela anao hamorona atiny mihetsika nefa tsy mila manam-pahaizana multimedia. Ny famoronana votoaty haino aman-jery manankarena dia tsotra ankehitriny toy ny famoronana slide PowerPoint. Mora ampiasaina i Moovly ary mahatonga ny rehetra ho toy ny pro multimedia.
Ohatra amin'ny fampiasana avy amin'ny Moovly toerana:
Lahatsary mihetsika - Ampiasao Moovly hamoronana horonan-tsarimihetsika, fampisehoana vokatra, fampianarana manintona na fomba fanaovana video amin'ny fomba mora sy mahitsy. Manampia feo, feo ary mozika ary ampifanaraho amin'ny alàlan'ny interface interface tsotra ny fotoana rehetra. Avoahy amin'ny Youtube, Facebook ny horonan-tsarinao, apetraho amin'ny tranokalanao izany na ampidinoo hampiasaina ivelan'ny Internet.
Fampisehoana 3.0 - Adinoy ny slide. Mifantoha amin'ny foto-kevitrao ary ampio ireo sary hita ao anaty filaharana manintona tohanan'ny fanovana sy sary mihetsika mahasarika izay mitaona ny sain'ny mpihaino anao. Tohano amin'ny fomba vaovao sy tsotra tanteraka ny famelabelaranao. Avadiho mora foana ho lasa horonan-tsary ny fampisehoanao ary ny mifamadika amin'izany.
Doka aseho - Sariho amin'ny fihetsika ny sain'ny olona: mamorona fanevan-tsainao manokana, trano fanaovana sary na fanaovana doka an-tsary hafa ho an'ny tranonkalanao manokana na hafa. Mamolavola fampiroboroboana, fampandrenesana na hafatra hafa misy sary mihetsika mahafinaritra ho an'ny efijery rehetra: fahita lavitra, fahita lavitra, finday avo lenta, takelaka,… Ataovy dika mitovy dika mitovy iray ahafahana miovaova araka izay tianao, na amin'ny lafiny hafa aza.
Infografika iraisana - Tohano ny tantaranao amin'ny alàlan'ny sary an-tsary ny fampahalalana, ny fironana, ny statistika na ny angona hafa. Mampiasà tabilao, sarintany, sary ary sary maro loko hanehoana ny fahitanao, ny fikarohana na ny tatitra nataonao. Ataovy mifanakalo ny infographic-nao: avelao ny mpihaino hahita vaovao fanampiny amin'ny alàlan'ny hetsika atao amin'ny alàlan'ny totozy na tsindrio, pop-up ary fifandraisana hafa.
Video Clips - Ampiasao Moovly hamoronana horonantsary mozika anao manokana. Ampidino ny làlan'ny mozika mp3, ampio sary, mozika, sarimiaina na koa sombina horonantsary. Ampifanaraho amin'ny gadona ny sarimiaina ataonao ary aondraho ny zavaboarinao hizara izany amin'ny namanao.
E-karatra - Mamolavola e-carte mihetsika na fanasana an-tserasera amin'ny fotoana rehetra. Gaga ny namanao sy ny fianakavianao amin'ny hafatra na fanambarana tany am-boalohany. Atambaro ny sary, ny sarimiaina ary ny lahatsoratra amin'ny fanasana an-tserasera na faniriana maharesy lahatra. Avoahy amin'ny Facebook, Youtube na… amin'ny Moovly!
Tags: sary mihetsikaanimé videoAnimationsehatry ny sary mihetsikainfographic interaktifmoovly
Torolàlana ho an'ny mpivarotra amin'ny doka fifanakalozana Facebook
Aug 12, 2013 amin'ny 10: 06 AM
Wow, hojereko io azo antoka.